N'iburu n'uche mkpa ekwentị dị na ndụ anyị kwa ụbọchị taa, anyị na-elekọta ha dị ka nwatakịrị, site na ịzụta ha ihe mkpuchi, iko dị nro maka nchedo ihuenyo, mgbanaka na azụ maka njide na ọbụlagodi maka ndị nchekwa mmiri ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe akaebe nke ...
QGIS etinyela onwe ya dị ka ngwa ọrụ na-emepe emepe na-emepe ngwa ngwa na usoro nkwado maka iji ya rụọ ọrụ. Obi dị anyị ụtọ ịmata na ụdị QGIS maka ngwaọrụ mkpanaka adịlarị. Expdị ngwa ngwa eji arụ ọrụ na-eme ka ngwa desktọọpụ họrọ ịmepụta nsụgharị maka iji ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Ihe…
Apụta, Geospatial - GIS, qgis
Nweta ziri ezi na ihe dị n'okpuru site na iPad / iPhone
Onye natara GPS nke ngwaọrụ iOS, dịka iPad ma ọ bụ iPhone, na-enweta ihe ziri ezi n'usoro nke ihe nchọgharị ọ bụla ọzọ: n'etiti mita 2 na 3. Ewezuga GIS Kit, anyị ahụla ohere ole na ole iji meziwanye nkenke ya, agbanyeghị site na ndụmọdụ enyi, anyị hụrụ na ọ na-atọ anyị ụtọ ilele nke a ...
GPS / Equipment, mbụ echiche
SuperGeo abatakwa jikọrọ aka GPS pl na-enye turnkey ngwọta maka iOS
SuperGeo Teknụzụ, kwupụtara mmekọrịta na-atọ ụtọ na GPS PL, ụdị ọrụ na-adọta uche ma na-akwalite kwa ụbọchị site na ụlọ ọrụ na kama ịsọ mpi maka ahịa, mekọrịta mmekọrịta na ịchọ ahụmịhe ka mma maka ndị ọrụ. Abụọ ụlọ ọrụ na-enye GIS ngwọta maka mobile ngwaọrụ, ruru ha…
Vbookz, ọkpọ ọkpụkpọ kacha mma maka iPad / iPhone / iPod
Gụ akwụkwọ agụpụtara na-agbanwe n'ụzọ anyị si enwe ọ enjoyụ n'akwụkwọ. Karịsịa, ọ na-amasịkarị m ịnụ ụtọ isi akwụkwọ na ihe ndetu site na ezigbo akwụkwọ, ịkwụsị ma jiri nwayọ na-agụ akwụkwọ iji mebie akụkọ ọma ahụ. Ma ọ dịtụghị mgbe ọ bụla m chere na ịga njem nwere ike ịbụ ...
Ntụrụndụ / n'ike mmụọ nsọ
Afọ dị ukwuu nke Google Chrome
Ihe banyere Google Chrome bụ ihe ịtụnanya nke ihe ekwuru 4 afọ gara aga: "Ihe nchọgharị ahụ nke na-achọ ịbụ sistemụ arụmọrụ" Echetara m na September 2008 edere m banyere otu Google si bido ihe nchọgharị ya, mgbe atụmanya dethrone Internetntanetị. Onye nchoputa yiri ihe nzuzu otu esi eche echiche ugbua na ...
Mepụta ngwa nke aka anyi
O nwere ike ịbụ na iduzi otu n'ime ezigbo ngwọta dị mma maka iwulite ngwa mkpanaka. Mgbanwe o nwere, gbakwunyere na ọnụ ọgụgụ nke nyiwe akwado gosipụtara ọrụ dị ịtụnanya nke ndị okike ya nke ị nwere ike iji were blọọgụ, ndepụta RSS ma ọ bụ ọdịnaya mgbasa ozi na ngwa ndị a ga-ekesa na ụlọ ahịa nke ...
innovations, Internet na Blogs, My egeomates
obi ụtọ Ista
Ọ bụrụ na e nwere ihe dị mma banyere ụbọchị a ... ọ bụ ya na ezinụlọ ya. ... site na hammock ... site na iPad ... site na ebumnuche kachasị mma
XPERIA mini X10, mbụ zutere gam akporo
N'ime atụmatụ Geofumadas maka 2012 bụ ule nke ngwa gam akporo, na-eche na ọ bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha. Anyị maara na Apple ga-anọ n'ọnọdụ ọfụma na ọkwa mkpanaka mana n'adịghị ka ihe niile na-emetụta Apple mechiri emechi, gam akporo ga-enwe uto na-apụghị izere ezere. Ya mere…
android Emmanuel My mbụ echiche
Woopra dị maka iPad
Woopra bụ otu ngwa kacha mma maka inyocha mgbasa ozi saịtị dị ndụ. Oge ụfọdụ gara aga emere m nyocha nke ngwa desktọọpụ, Ọzọkwa enwere nsụgharị maka Google Chrome ma ugbu a, a gbanwere nsụgharị nke naanị maka iPhone, na ụdị nsụgharị 2.0 zuru ụwa ọnụ nke dakọtara ...
Anyị ga-enwe Microstation maka Mac?
Afọ ole na ole gara aga AutoDesk juru anyị anya na ọ laghachiri na Mac; Ọ bụ ezie na ọ kabeghị ụdị zuru oke yana ụfọdụ arụmọrụ anaghị efu, anyị ghọtara usoro pụtara ìhè na mpaghara nke amaara oge ụfọdụ ka ahọpụtara. Na Bentley laghachiri Mac, bụ atụmanya na n'afọ ndị na-adịbeghị anya na-apụta. ...
Bentley Systems Emmanuel